घरेलू पोल्ट्री सबैभन्दा लाभदायक र छिटो-payback व्यापार हुन मानिन्छ। त्यसैले, धेरै मानिसहरू यो गतिविधिमा संलग्न थालेका छन्। तथापि, अनुभवहीन किसानहरु धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्न छ। यो लेख पढ्ने पछि, तपाईं सिक्न हुनेछ किन र कसरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड संग अन्डा को उपचार।
पूर्व-disinfection के हो?
बस यो साँच्चै एक वैध आवश्यकता छ भन्छन्। Pre- अन्डा को प्रक्रिया hatchlings संक्रमण को सबै किसिमका देखि स्वस्थ पशुधन को उपज वृद्धि र सुरक्षा को लागि अनुमति दिन्छ। वयस्क को Asymptomatic रोग खोल पूर्ण सफाई दिन छैन।
प्रायजसो, रोग को रोगजनकों गोबर संग उत्सर्जित। पनि चरा चयापचय उत्पादनहरु अक्सर वर्तमान helminth अन्डा छन्। यो विशेष जलपक्षी कलहंस र बतख लागू हुन्छ। यी चरा गोबर अन्डा प्राय भन्दा turkeys वा कुखुरा मैला पार्नु छ।
अन्डा को संसाधन incubator मा राख्दै अघि पेरोक्साइड कि सुरुदेखि - छैन disinfection मात्र सम्भव विधि हो। यस्तो उद्देश्यको लागि एक घरेलू वातावरणमा अक्सर प्रयोग गरिन्छ पोटासियम Permanganate समाधान छ। को premixed ट्यांक पानी जो को तापमान बारेमा तीस डिग्री छ, हालिएको छ। अण्डा एक चिसो तरल मा डूबा छ भने, त्यसपछि आफ्नो सामग्रीहरू बस skukozhilas।
न्यानो पानी र पोटासियम Permanganate संग बेसिन थपियो र क्रिस्टल को पूर्ण dissolution सम्म भरिएर पोखिन्छ। फलस्वरूप, एक धनी गुलाबी रंग तरल प्राप्त गर्नुपर्छ। कि पछि यो अन्डा डिप गर्न सम्भव छ। यो चरम सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। पाँच मिनेट भित्र हुनुपर्छ समाधान राख्न। त्यसपछि, यो नरम माटो पुरानो टूथब्रश प्रयोग हटाइएको, बिस्तारै अण्डा सुक्खा, सफा कपडा मा फैलाउन र तिनीहरूलाई पानी सकिन लागि प्रतीक्षामा छ। को अन्डा प्रक्रिया पूरा भएपछि, यो कैसेट मा विस्तार गर्न सकिन्छ।
मा ठूलो उद्यम व्यापक प्रयोग उपचार को अन्डा पहिले गर्मी चालू संग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यो उद्देश्य polutoraprotsentny समाधान को लागि। को अन्डा राखेँ पाँच मिनेट त्यहाँ उभिएका थिए। तिनीहरूले त्यसपछि झिकेर थिए, न्यानो शुद्ध पानी र obsushivayut संग धोए।
यो पेरोक्साइड समाधान एक हट अन्डा को एक बिट थियो भनेर निश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। अधिकतम तापक्रम disinfecting तरल 35-40 डिग्री छ। को पेरोक्साइड साथै राम्रो "Persintam" र "Dezokson" सिद्ध। को खोल समेट्छ कि फिलिम को विफलता को एक जोखिम सधैं छ रूपमा प्रशोधन, चरम सावधानीपूर्वक गरेको हुनुपर्छ। यस्तो बेवस्ताई हुन सक्छ प्वालहरू को blockage भ्रूण एयर अनुमति दिन्छ।
ट्याब लागि सामान्य सिफारिसहरू
अन्डा को प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा भएपछि, तिनीहरूले एउटा incubator मा राखिएको गर्न सकिन्छ। बिहान - यसबाहेक, यो साँझ, धुनमा मा चिकन राख्नु गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो उद्देश्य अण्डा एउटै आकार बारे छन् लागि चयन गर्न उचित छ।
तिनीहरूले अलिकति रूपमा न्यानो छन् सम्म पर्खन आवश्यक बिछाउने अघि। अण्डा एक incubator मा राखिएको हुँदैन शांत। अन्यथा खोल चिस्यान भेला गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, अन्त preprocessing अन्डा गरेपछि तिनीहरूले जहाँ हावा 25-27 डिग्री गर्न न्यानो छ न्यानो कोठा, राख्नुभएको गर्नुपर्छ, र आठ घण्टा त्यहाँ बाँकी। उच्च तापमान को अवस्थामा भ्रूण राम्ररी विकास गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
यो गर्मी चालू सुरु छिटो थियो महत्त्वपूर्ण छ। चार घण्टा भन्दा पहिलो न्यानो-अप मा कुनै थप लिनुपर्छ। एउटै कारण लागि, ट्रे पानी जसको तापमान बारेमा 40-42 डिग्री छ भरिएको छ।
एक incubator, प्रभावित जीवाणु वा फंगल संक्रमण मा अन्डा ठाँउ छैन। यो सबै चयन गरिएका वस्तुहरू सही रूप छ कि महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले बेल्ट, growths र पनि नाजुक खोल हुनुपर्छ। यी नमूनाहरू देखि एक राम्रो सन्तान प्राप्त गर्न सक्दैन।
तपाईं पनि बचेराहरूलाई एक हप्ताको लागि राखिएको छैन भनेर उपयुक्त मात्र ताजा अन्डा छन् हटाउन भनेर सम्झनुपर्छ। चयन गरिएको वस्तुहरूको गुणस्तर को खोल ज्योति गर्न अनुमति दिने, जाँच candling। उमेर हावा कोठामा को अन्डा को रूपमा निर्धारण गरिन्छ। उपयुक्त गर्मी चालू उदाहरणहरू मा यो दुई पाँच मिलिमिटरमा को आकार पुग्छ।
Percussion - कस्तो प्रकारको विधि हो? Percussion र palpation
परिभाषा, उद्देश्य, सम्बन्ध अन्य विज्ञान संग: lexicology के हो
बच्चाहरु को लागि नक्षत्र मिथुन। नक्षत्र बारेमा रोचक तथ्य